Somalia: Yaa laga talo geliyay go'aankii Dowladda ka qaadatay xiisadii Khaliijka
Home Somali News South and Central Somalia: Yaa laga talo geliyay go’aankii Dowladda ka qaadatay xiisadii Khaliijka
Somalia: Yaa laga talo geliyay go’aankii Dowladda ka qaadatay xiisadii Khaliijka
Dowladda Soomaaliya ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixisay go’aankii dhexdhexaadnimada ay ka qaateen khilaafkii u dhaxeeyay dowladda Qatar iyo xulafada Sacuudiga uu hogaaminayo.
C/qaadir Xaaji Axmed, wasiiru dowlaha arimaha dibadda Soomaaliya oo wareysi siinayay BBC-da ayaa sheegay in go’aankaasi uu ahaa mid dowladda ay in badan ka fiirsatay ka hor inta aysan qaadan go’aanka dhexdhexaadnimada.
“Mar kasta markaad qaadaneysid go’aan siyaasadda Arrimaha dibadda waa in aad dhinac walba ka fiirisaa, Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha markii go’aankan ay qaadanayeen maku deg degin, wuxuu ahaa go’aan ay ka fiirsadeen”ayuu yiri Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda.
Wasiiru dowlaha ayaa sheegay in go’aanka dowladda qaadatay uu ahaa mid laga talo geliyay siyaasiyiin, khubaro, xildhibaano iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.
“Waa run Imaaraadka iyo Sacuudiga xiriiro soo jireen ayaa naga dhaxeeya iyo is weydaarsi ganacsi, Soomaali badan ayaa ku nool oo Ganacsi ku leh, laakiin ma ahan in Soomaaliya la yiraahdo go’aankan gaara ama waa naga soo horjeedaan, taas qof dhihi karta ma jirto Soomaaliya”ayuu yiri Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda.
“Go’aanka Soomaaliya gaartay ma ahan mid dowlad looga soo horjeedo ama dowlad kale lagu durayo, Soomaaliya waxay qaadatay go’aan dan u ah umadda, sharafta iyo dowladda Soomaaliyeed”ayuu yiri.
Maxaa badalay Mowqifkii Madaxwene Waare ee Khilaafka Dowladda ?
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa...
Ciidamo ku dagaalamay Cadaado hal arin darteed [Akhriso]
Somalia: ONLF expects positive outcomes in Asmara summit
Goorma ayay dhaceysa Doorashada Galmudug (DHAGEYSO)